I-American, Spirit, Southwest Airlines: Kwenzeka ntoni kwi-79 yezigidigidi zeBailout?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-American, Spirit, Southwest Airlines: Kwenzeka ntoni kwi-79 yezigidigidi zeBailout?
Airlines • Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Iinqwelomoya e-United States zifumene ngaphezulu kwe- $ 79 yezigidigidi kwimali yokuhlangula kwiibhili ezintathu ezinxulumene ne-COVID ngo-2020-2021 ukubanceda, abasebenzi babo, kunye nomzi mveliso wokuhamba ngomoya basinda kwesona sibetho sibalaseleyo se-COVID. ICongress ijonge le mali ukuba iye kubaqhubi beenqwelomoya, abagadi beenqwelomoya, nakwabanye abasebenzi beenqwelomoya kunye nabasebenzi kwisikhululo seenqwelomoya ukuqinisekisa ukuba bahlawulwa ngexesha lokudakumba kakhulu kunye nokuqinisekisa ukuba iinqwelomoya ziya kuba namandla okuhlangabezana neemfuno ezandayo zokuhamba ngokukhawuleza xa iCovid imeko yaphucuka.
I-FlyersRights, umbutho wokukhuthaza abathengi ukuba ubize iindibano zokubeka iliso kwii-CEO zeenqwelo moya kunye nabameli babasebenzi nabakhweli.
Iinqwelo-moya zanikwa inkxaso-mali enkulu yomdibaniso ukugcina inkonzo yomoya yoluntu yomelele kunye nokunciphisa usulelo lwe-COVID.
Iirekhodi zamva nje zokurhoxiswa okuphezulu, ukulibaziseka kwenqwelomoya, kunye nenkcaso yenqwelomoya kwezinye izikhokelo zeCDC ezibalulekileyo zibuza ukuba ingaba imali yomhlawuli werhafu isetyenziswe gwenxa ngabaphathi beenqwelo moya
“Iinqwelo-moya zaseMelika, ii-Airlines, kunye neeNqwelomoya zase Mzantsi-ntshona, zisilele kwaphela kubantu baseMelika”
UFlyersRights.org umongameli uPaul Hudson
Ukucinywa okukhulu kwenqwelomoya
Ngalo lonke ixesha lasehlotyeni, iinqwelomoya ziye zarhoxisa amakhulu eenqwelomoya ngenqwelomoya ngosuku kuba bezingenabasebenzi baneleyo abakulungeleyo ukuhamba. Ngosuku olubi kakhulu, iAir Airlines irhoxise ngaphezulu kwesiqingatha seenqwelomoya.
Oku akwamkelekanga, kwaye uSenator Maria Cantwell, uSihlalo weKomiti yezoRhwebo ye-Senate, wathumela ileta malunga nalo mbandela kwiinkampani zeenqwelo moya ngoJulayi. IFlyersRights.org wadibana nabasebenzi bakhe ukuxoxa ngalo mbandela ngoSeptemba 1st kunye nokuphakamisa isisombululo kutshanje sokuxhatshazwa kweenqwelo moya.
IKomiti ejongene nokuJongwa kweNdlu iceliwe
IFlyersRights.org icele iindibano zokubeka iliso kwikomiti ukunyanzela uDoug Parker, uGary Kelly, uTed Christie, kunye nabanye abaphathi beenqwelo moya ukuba bachaze into abayenzileyo ngemali ye-COVID yokunceda kwaye kutheni iinqwelomoya zabo zisilele ukuhambisa oko umthetho wawufuna.
Iindibano zokongamela kufuneka zibandakanye nabameli babakhweli kunye nabameli babasebenzi. I-FlyersRights.org icebise isicwangciso sokuvuselela kunye nentlalontle esiza kugcina iinqwelomoya zinenzuzo, zibaleka kwindawo ephezulu ngexesha lobhubhane, kwaye ziya kuqinisekisa ukuhamba komoya kukhuselekile, konke ngexabiso eliphantsi kuneepakethe zoncedo.
IFlyersRights.org ngumbutho omkhulu wabakhweli beenqwelo moya; ikhuthaza abakhweli beenqwelo moya phambi kweFAA, DOT, TSA kunye nezinye iiarhente zikarhulumente